Posted by Tranquillus | Apr 18, 2020 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
Waqtigan xaadirka ah, in ka badan inta caadiga ah, waxaad ku bixineysaa wakhtigaaga dirida iyo helitaanka dhammaan noocyada kala duwan email. Waxaad marar badan ku dhammaysataa fariimahaaga "Daacadnimo," "Salaan wanaagsan" ama "salaan wanaagsan". Xaqiiqdi ma aadan qorshayn ofku qor email to your shugaba. Laakiin ha ahaato asxaabtaada ama kormeerahaaga. Waxaad jeclaan lahayd inaad la qabsato oo aad ku darto wax yar oo sheeko ah qaaciddada akhlaaqda leh ee aad u isticmaasho dhamaadka emaylka. Dooro weedha caadiga ah si loo dhammeeyo farriinta ayaa ku dari doonta xoog. Laakiin dabcan adeegsiga erey aan habooneyn ama soo gaabin nooc SMS ah waxay horseedi kartaa safar waddo. Qofna qoraal uma qori kartid. Gaar ahaan adduunka xirfadda leh.
42 tusaalooyin oo ah qaaciidooyinka ixtiraamka leh ee lagu dari karo dhamaadka emaylka.
Halkan waxaa ah tusaalooyinka 42 ee qaaciddooyinka edeb leh ee aad u isticmaali karto si aad ugu dhammeysid emaylkaaga qaab. Waxaan ula jeedaa boosta ee warqad maahan. Haddii aad go'aansato inaad warqad ugu dirto emayl. Si cad ugu muuji jirkaaga fariintaada joogitaanka dukumiintiga, CV ama warqad dabool tusaale ahaan. Wax kastoo ay tahay baaxadda dukumiintiga ee aad ku soo lifaaqday. Hadday xaraf tahay, waxay ku dhammaan doontaa weedh edeb leh oo qadiimi ah.
Waxaan kuu rajeynayaa maalin weyn
Si xushmad leh adiga
Iyadoo dhammaan ixtiraam la'aanta,
Anigoo salaamaya salaan
Biloow wanaagsan usbuuca
Hayso fasax wanaagsan,
Anigoo ku mahadnaqaya,
Anigoo amaan ah
Waxaan sugayaa iskaashi,
Markaad ku hadasho,
Waxaan jeclaan lahaa inaan kugu wargaliyo si waxtar leh,
Waxaan rajeynayaa inaan ku caawiyo,
Anigoo tixgalinaya tixdayda,
Goor dambe is arag
In la raaco,
Inta jawaabtaada la sugayo
Waad ku mahadsan tahay dareenkaaga,
Waad ku mahadsan tahay horay,
READ Template warqad si aad u dalbato bixinta mushaharkaaga oo aan la bixin
Qaaciddooyin sharaf leh oo caadi ah oo lagu daro dhammaan waraaqahaaga
Fadlan aqbal, Madam, Sir, muujinta xushmaddayda qotada dheer.
Fadlan aqbal, Madam, Sir, muujinta dareenka ixtiraamka leh.
Fadlan aamin, mudane gacaliye, qalbiga iyo dareenkayga ixtiraamka leh.
Fadlan aqbal, Madam, Sir, salaankayga qadarinta leh.
Fadlan aqbal, Mudane, muujinta qadarindayda qotoda dheer.
Fadlan aqbal, Sayidow, xaqiijinta ixtiraamkayga qotoda dheer.
Soo dhawow, Madam, Sir, salaankayga qadarinta leh.
Kaalay, Madam, Sir, salaankayga saxda ah.
Fadlan aqbal, Madam, Sir, Salaan wacan.
Fadlan aqbal, Madam, Sir, xaqiijinta tixgalintayda ugu saraysa.
Qaado, Madam, Sir, Salaan wacan.
Fadlan aqbal, Madam, Sir, muujinta dareenkeena xushmadda iyo qadarinta leh.
Fadlan aqbal, Madam, Sir, muujinta dareenkeena aadka u dadaala.
Iyada oo tixgalin ixtiraam leh leh, fadlan aqbal, Madam, Sir, muujinta tixgalintayda aadka u kala mudan.
Inta heshiiskaaga la sugayo, fadlan aqbal, Madaam, mudane, salaamayaasheyda sarsare.
Haddii aad xiisaynayso mashruuca, aan la kulanno. Fadlan aqbal, Madam, Sir, salaankayga qadarinta leh.
Intaad jawaabtaada sugayso, fadlan aqbal, Madaam, Sayidow, salaan gacaliyahayga salaan.
Aniga oo kaa jawaabaya jawaabteyda, waxaan kaa codsanayaa, Marwo, Sir in aad u naxariisato si aad u hesho salaankayga xushmada leh.
Muuqaalkan, waan u mahadnaqayaa, Marwo, Sir, inaad aqbasho salaanta qadarinta leh.
Anigoo sugaya jawaabta aan rajeynayo inaan wanaagsanaado, waxaan kaa codsanayaa inaad hesho, Marwo, Sayidow, salaankeyga ugu wanaagsan.
READ Habka ugu fiican ee si xirfad leh loogu qoro warqad xirfad leh
Qaaciddada wanaagsan ee akhlaaqda wanaagsan ee emaylkaaga July 25th, 2021Tranquillus
horeWarbixinta nashaadaadka, waa aaladda lagama maarmaanka u ah faafinta macluumaadkaaga.
socdaU dhig sanduuqaaga boostada sidii sanduuq muusig
Waraaqo tusaalooyin ah oo lagu codsado lacag bixinta wakhtiga dheeriga ah
Miyay fiicantahay in la diro iimaylo ama warqado?
Muhiimad intee le'eg ayuu u leeyahay qorista qoraalkaaga xirfadeed?